Ilkay Gundogan Oo Mar Kale Loo Magacaabay Ciyaaryahanka Ugu Fiican Premier League.
HomeHoryaalka IngiriiskaIlkay Gundogan oo mar kale loo magacaabay ciyaaryahanka ugu fiican Premier League.
March 12, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Ilkay Gundogan ayaa mar kale loo magacaabay ciyaaryahanka ugu fiican Premier League, isagoo ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiicnaa bisha Janaayo iyo bishii hore ee Febraayo ee sanadkan.
Ka dib markii uu dhaliyay shan gool bishii Janaayo si uu uga caawiyo City inay gacanta ku dhigto hanashada horyaalnimada Premier League, xiddiga heerka caalami ee Jarmalka ayaa dhaliyay afar gool oo dheeri ah bishii Febraayo iyadoo kooxda Guardiola ay guuleysatay dhamaan shantii kulan ee ay ciyaareen.
Waxa uu ka soo kabsaday rigoore uu dhaliyay labo gool kulankii ay 4-1 kaga badiyeen Liverpool ee ka dhacay Anfield, halka uu sidoo kale labo gool ka dhaliyay Spurs isla markaana uu ka caawiye Raheem Sterling gool kulankii kooxda Burnley.
Waxa kale oo uu ka soo muuqday guulaha ay City ka gaadhay Arsenal iyo West Ham Gundogan ayaa seegay bilowgii ololaha ka dib markii uu si fiican u tijaabiyey Covid-19, laakiin tan iyo markii uu u soo muuqday inuu si joogto ah uga bilaabay qadka dhexe.
Xiddigii hore ee qadka dhexe ee kooxda Borussia Dortmund ayaa ku guuleystay abaalmarinta isagoo ku garaacay xidigaha kala ah daafaca Fulham Joachim Andersen, garabka Leicester Harvey Barnes, saaxiibkiisa City Joao Cancelo, qadka dhexe ee Manchester United Bruno Fernandes, West Ham’ xidigeeda Jesse Lingard, qadka dhexe ee Wolves Ruben Neves iyo weeraryahanka Leeds Raphinha.